Online jobs In Nepal: बिट्कोइन के हो त?? बिट्कोइन कमाउन चाहानुहुन्छ ??
--> बिट्कोइन्सबाट तपाई आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
--> बिट्कोइन्सबाट तपाई विभिन्न अनलाइन साइट्सबाट सामान खरिद गर्न नि सक्नुहुन्छ जुन कुरियर मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ।
--> अब, हैन तपाई मैले कमाएको बिट्कोइन्स मेरै हातमा पाउन चाहानुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भब छ।
©सबै भनदा सजिलो तरिका चाहीँ, नामक साइटबाट virtual debit card मगाउन सक्नुहुन्छ। सो कार्डबाट सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ या विभिन्न ATMबाट नगद नै लिन सक्नुहुन्छ। कार्ड रजिष्टर गर्नलाई याहाँ जानुहोस्-->> https://goo.gl/3pu1si
Posted by Prem Kumar Shrestha at 9:01:00 PM
Labels: coinbase, earn bitcoins online with your mobile, बिट्कोइन, बिट्कोइनको वालेट
Devyagini Acharya July 24, 2017 at 9:00 PM
इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डि.भी.) 2019